Maxay Dalalka Adduunka Ugu Loolamayaan Marinka Baabul Mandeb? – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Waxaa aad isu soo taraya loolanka quwadaha adduunka ee ku aaddan marinka muhiimka ah ee Baabul Mandeb ee Badda Cas, waxaana la sheegayaa in loolankaas uu xasarado ka abuuri karo gobolka Geeska Afrika oo dhan.
Wariyaha BBC-da Moowliid Xaaji ayaa qadka taleefoonka kula Prof Xuseen Warsame oo ah bare wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka London, wuxuuna weeydiiyay muhiimadda uu leeyahay marinkan, wuxuuna yiri “Waa muhiim meeshaas, waxayna muhiim u tahay ganacsiga adduunka, meesha waxaa mara maraakiib aad iyo aad u badan, sanadkii ina dhaafay waxaa lagu qiyaasay 17 kun oo markab in ay mareen, taas oo micnaheedu tahay in ay sidaan xoolo dhan 700 oo bilyan oo doolar, una dhiganta boqolkiiba 20% ganacsiga adduunka oo dhan, sidaas darteed waa wax aad u weyn in lagu dagaalamo, cidkastana xoolaheediibay illaashanaysaa”.
Prof Xuseen wuxuu leeyahay “Masar sanadkii waxa ay marinta Suweys ka heshaa illaa 5 bilyan oo doolar, Soomaaliya kama faa’iideysato marinkan, waxayna kaliya u keentaa xasarad”.
Xalka waxa uu u arkaa “Haddii Soomaalida kala qoqoban isu timaado, oo ay bilaabaan in ay qorshe samaystaan, waxay noqon karaan meesha Bariga Afrika ugu dhaqaalaha badan 20 sano ee soo socda”.
Sida magacaba laga fahmi karo, kalmaddu waa afka Carabiga, micnaheeduba waxa ay tahay ‘Albaabkii Illinta’. Lama oga sababta loogu bixiyay, laakiin qorayaasha Carabta qaarkood waxaa laga soo xigtay in loogu bixiyay dadkii badnaa ee sahmiyeyaasha ahaa ee ku dhintay marinkan iyaga oo aqoon u lahayd.
Waa marin aad u yar oo kala qeybiya badweynta Hindiya iyo Badda Cas, waxa labada dhinac ka kulaala dalalka Jabuuti, Yemen iyo Eritrea, halka Soomaaliya ay kaabiga ku heysto oo markab aan badda Soomaaliya marin uusanba gaari karin marinkan, kana soo gudbi karin isaga oon marka dambe marin baddan Soomaaliya.
Lahaanshaha sawirkaGETTY IMAGESImage captionCiidanka Maraykanka ee Jabuuti ku sugan
Inkasta oo sharaxaadda rasmiga ah ee dowladahan ay ku sheegaan sababta ay saldhigyada u furteen ay tahay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo burcad badeeda, haddane Prof Xuseen waxa uu qabaa in dal kasta uu illaashanayo danahiisa ganacsiga.